यी ९ डरलाग्दा चलचित्र, जुन तपाई एक्लै बसेर हेर्न सक्नुहुन्न ! - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
यी ९ डरलाग्दा चलचित्र, जुन तपाई एक्लै बसेर हेर्न सक्नुहुन्न !
प्रकाशित मिति: ४ आश्विन २०७४, बुधबार
असोज ४, काठमाडौं । कुनै कुनै चलचित्र यति डरलाग्दा हुन्छन की तपाई एक्लै बसेर हेर्न त के हेर्ने बारे सोच्न पनि सक्नुहुन्न । विश्वमा बन्ने चलचित्रको तथ्याङ हेर्ने हो भने २० प्रतिशत चलचित्र हरर बनिरहेका छन् । हरर चलचित्र हेर्ने दर्शकको आफ्नै जमात छ । हरर चलचित्र हेरेर दर्शक डराउने अनि रमाउने गर्छन् । आज हामी त्यस्ता ९ डरलाग्ने चलचित्रहरुको बारेमा चर्चा गर्दैछौं जसले दर्शकलाई डराउन समेत सफल भएको छ भने अवार्ड पनि हात पार्न सफल भएको छ ।
१ .दि एक्जारसिस्ट
बिश्वभर प्रख्यात अवार्डको रुपमा मानिन्दै आएको ओस्कार अवार्डमा नोमिनेशनमा पर्ने सफल भएको ‘दि एकजारसिस्ट’ १९७४ मा बनेको हो । यो अमेरिकाको पहिलो ओस्कार नोमिनेसनमा परेको चलचित्र हो । चलचित्रमा एउटी केटीको शरिरमा प्रेतको साया पर्ने र त्यो सँग लड्नुलाई डरलाग्दो तरिकाबाट देखाइएको छ । यसै चलचित्रको कथालाई लिएर राम गोपाल बर्माले बलिउडमा ‘भुत’ नामक चलचित्र बनाएका छन् ।
२. ईविल डेड
सन् १९८१ मा ‘ईविल डेड’को पहिलो सिरिज आएको थियो । एक प्रेत आत्माको किताव जसमा शैतानी आत्मा एक लोकबाट अर्को लोकमा आउने जाने गर्छन् । उसलाई जंगलमा लुकाइएको थियो । केही बर्षपछि एउटा समुहले त्यो किताव खोल्छ । २०१३ मा रिबुट गरिएको यो फिल्म देश विदेशमा समेत केही अवार्ड जितेको छ ।
हलिउड चलचित्र ‘कन्ज्युरिङ’ लाई ओस्कार अवार्ड नमिलेता पनि यसलाई क्रिटिक्सले सबैभन्दा डराउने चलचित्रको रुपमा घोषित गरेको थियो । चलचित्रमा भुतप्रेतलाई समात्ने एक जोडीको बारेमा आधारित छ । यो चलचित्र प्रदर्शन हुदाँ एक्लै नहेर्न आग्रह गरिएको थियो ।
४. दि रिङ्ग
सन् २००२ मा रिलिज भएको अमेरिकी चलचित्र ‘द रिङ’ एक जापनिज चलचित्रमा आधारित छ । यो चलचित्रले देश बिदेशका केही अवार्डहरु समेत जितेको छ ।
५. स्लीपी होलो
१९९९ मा रिलिज भएको ‘स्लीपी होलो’ एक अमेरिकी हरर चलचित्र हो । यो चलचित्रले ओस्कारमा उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड जितेको थियो ।
सन् १९९२ मा रिलिज भएको चलचित्र ‘ड्रेकुला’ ब्रेम स्टोकरको चलचित्रमा आधारित छ । यो चलचित्रले स्ट्युम, मेकअप र साउण्डबाट तीन ओस्कार अवार्ड जितेको छ ।
७. साईलेन्स अफ दि लेन्ब्स
एक रियिल किलरको काहानीमा आधारित रहेको चलचित्र ‘साइलेन्स अफ दि लैन्ब्स’ले सर्वश्रेष्ठ चलचित्र, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री र स्क्रिनप्लेबाट ओस्कार अवार्ड जितेको छ ।
८. रोजमैरी बेबी
निर्देशक रोम पोलास्कीको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘रोजमैरी बेबी’ सन् १९७८ मा प्रदर्शन भएको थियो ।
यो चलचिले एक ओस्कार र एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड जितेको थियो ।
राम गोपाल वर्माको चलचित्र ‘भूत’बाट उर्मिलालाई फिल्म फेयर अवार्ड हात पारेको थियो ।। यो चलचित्र अमेरिकी फिल्म ‘दि एक्जारसिस्ट’ प्रेरित हो ।
कति महङ्गो कार चढ्छन् यी बलिउड सेलिब्रेटी ?
असनेपाल न्युज । एउटै फिल्मका लागि करोडौँ पारिश्रमिक लिने बलिउड कलाकारहरुको जीवन हामीले सोचेभन्दा धेरै आलिसान […]
यस्ता छन् सुन्दर बन्न प्लास्टिक सर्जरीको सहायता लिएका बलिउड अभिनेत्री
असनेपाल न्युज । हिजोअाज विश्व भरका कलाकारहरूमा प्लास्टिक सर्जरी गर्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ । यसैगरी बलिउडका […]
यस्ता छन् बलिउड कलाकारका बाल्यकालबारे रमाइला घटना (तस्बिरसहित)
एजेन्सी । बलिउडका कलाकारले आज बालदिवसका दिन आफ्नो बाल्यकाल बारे रमाइला घटनाहरु सुनाएका छन् । यसका साथै […]
एक एपिसोडको ११ करोड लिन्छन् सलमान, यस्तो छ अन्य टिभी शोका निर्णायकको अवस्था
काठमाडाैं । बलिउडका धेरै जस्ता सेलिब्रेटीहरु अहिले फिल्ममा कमै देखिएर टिभी शोमा निर्णायकको रुपमा काम […]
‘चेन्नाई एक्सप्रेस’ देखि ‘डर’ सम्म, यी हुन् शाहरूखका सुपरहिट फिल्म
असनेपाल न्युज । आजबाट ५२ वर्षका भएका छन् बलिउड अभिनेता शाहरूख खान । रोम्यान्टिक देखि लिएर एक्सन र थ्रिलर […]
मेकअप बिना कस्ता देखिन्छन त सिरियलका नायिका ?
काठमाडौं । टेलिभिजन सिरियलमा काम गर्ने पात्रले लगाएको पहिरन,मेकअप र उनीहरुको स्टाईलका कारण धेरै दर्शक […]
किन तीन दिनदेखि घर बाहिर निस्किएनन् प्रकाश,शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ कि छैन ?
यसरी बनाइदोरहेछ रक्सी,मुसा देखी मोजासम्म
सन्तान वियोगको बज्रपातमा प्रचण्ड,आँखाकै अगाडि गुमाए दुई सन्तान
साताको पहिलो दिन नै सुनचाँदीको मुल्यमा वृद्दि
प्रचण्डको दागबत्तीसँगै सँधैका लागी अस्ताए प्रकाश दाहाल (विज्ञप्ती सहित) (अपडेट)